Maka Social Action Day March 17th 2018 nwa akwụkwọ ntoro ahọrọ itinye 'Meraki Fest'; ihe oriri na ememe egwu obodo na-egosi ihe dịgasị iche iche nke obodo. Ụbọchị gụnyere nri nke ụlọ anyị na-eto eto na-arụ n'ụlọ ebe ndị mụrụ ha sitere na Bekee, Kurdish na Ghanian. Enwekwara onyinye sitere na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ahịa. Egwuregwu niile na mmemme niile nyere ndị na-eto eto nọ na Sheffield na onyeisi oche nke ndị ntorobịa anyị, Tashinga Matewe na-akwado ya.
A na-eme ihe omume a na etiti obodo ma etinyere akụkụ nke mmefu ego iji nweta ebe a na-aga, ebe ndị fọdụrụ bụ ịkwụghachi ihe oriri maka nri e mere.
Ikwu na enwere m obi ụtọ na nhazi ha adịghị eme ha ikpe ziri ezi. Ebe ndị ọrụ ahụ na-ahụ maka nkwadebe maka ụbọchị ahụ, ndị ahụ na-eto eto na-eme ihe omume ahụ n'onwe ya. Nke a gụnyere ụfọdụ n'ime ụmụaka ndị na-eto eto na-ebu nleta nleta iji hụ na ebe mgbakọ ahụ dị, na-echebara ihe ndị dị mkpa nri, nyere aka nyocha ihe ize ndụ ma debe atụmatụ zuru ezu maka oge nke ụbọchị ahụ.
Nabeela Mowlana - Onye isi ụlọ ọrụ NCS
Ana m anabata ya amụma nzuzo *
GDPR mejupụtara Nzuzo nzuzo - http://www.elementsociety.co.uk/privacy-policy/